Gadra 32 tsy hita tao Miandrivazo : Ny fanadihadiana no hamoaka ny marina tsy ho ela
Ny fonja tsy vaky, ary tsy nisy ny lositra na fitsoahana. Manoloana ny vaovao nivoaka an-gazety androany Alatsinainy 08 Novambra 2021, momba ny filazana fa « nisy gadra 32 tafatsoaka tao amin’ny fonjan’i Miandrivazo », dia nitondra fanazavana ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP) Atoa ANDRIAMAROAHINA RANAIVO Tovonjanahary.
Tsy marina ny vaovao. Raha tsiahivina ny zava-nitranga, dia ny 09 Aogositra 2021 no natao ny fifamindran’andraikitra teo amin’ny Lehiben’ny Fonja (CE) teo aloha sy ny CE vaovao. Nandritra izany no tsikaritra sy voamarina fa nisy voafonja miisa 32, tsy hita tao amin’ny Fonjan’i Miandrivazo.
Mitohy hatrizao ny fanadihadiana hahitana ny marina momba izany. Antenaina fa hivoaka tsy ho ela ny valiny. Ho mafy ny sazy miandry an’izay tompon’andraikitra voasaringotra anatin’ity raharaha ity.
Tahaka izao ny fanazavana feno nentin’ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP) Atoa ANDRIAMAROAHINA RANAIVO Tovonjanahary.
Fanatrarana ny tanjona : 1 volana hanatanterahana ny asa
Mila misikim-ponitra ny rehetra anaty 1 volana. Tsy tokony hisy handraraka ilom-by an-doha, ho fanatrarana ny tanjona. Nanentana sy nanome risi-po ary nampahery ireo mpiara-miasa rehetra ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, taorian’ny fananganan-tsaina teto Faravohitra, androany Alatsinainy 08 Novambra 2021.
1 volana mahery kely eo tokoa mantsy no hamitana ireo asa, mialoha ny fialan-tsasatra eto anivon’ny Fitsarana amin’ny ankapobeny. Famitana ny asa, anaty fanajana ny fitsipi-pifehezana, sy ny lalàna. Hisy ny fanaovana tomban’ezaka ho an’ny sampan-draharaha isan-tsokajiny sy ireo tompon’andraikitra tsirairay avy.
Nialoha ny lahateny nataon’ny ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, dia nisy ny fanentanana nataon’ny Mpitsabo eto anivon’ny Ministera, momba ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19.
Atolotra misesy ireo.